Wershadaha Elektarooniga ah ee Jumlada ah Soo-saare iyo Soo-saare Codsiga | Saxnimada QY
CODSIGA WARSHADAHA ELECTRONICS
Codsiga qaybaha CNC ee burushka cadayga ee korontada ku shaqeeya
Burushka cadayga ee korontada ku shaqeeya waa nooc ka mid ah cadayga uu ikhtiraacay Philippe-Guy Woog. Iyadoo loo marayo wareegga degdega ah ama gariirka xudunta mootada, madaxa burushka wuxuu abuuraa gariir aad u sarreeya, kaas oo isla markiiba u jajabiya daawada cadayga xumbo fiican oo si qoto dheer u nadiifisa ilkaha. Isla mar ahaantaana, bristles ayaa gariiraya. Waxay kor u qaadi kartaa wareegga dhiigga ee daloolka afka waxayna leedahay saameyn duugis ah unugyada cirridka.
Waxaa jira saddex siyaabood oo loo dhaqdhaqaajiyo madaxa burushka burushka cadayga korontada: mid waa madaxa burushka ee dib u celinta dhaqdhaqaaqa toosan, kan kale waa dhaqdhaqaaqa wareega, waxaana jira qalab dhamaystiran oo caday koronto ah oo leh laba madax burush. Buraashka cadayga ee korontada ku shaqeeya waa qalab lagu nadiifiyo ilkaha. Qaybaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah madaxyada cadayga, qolofka gudaha ee caagga ah, matoorada, xirayaasha, baytariyada, looxa wareegga, iyo qalabka dallaca.
Waxaa jira qaybo badan oo bir ah. Mashiinka CNC wuxuu door aad u muhiim ah ka ciyaaray soo saarista qaybaha birta ee cadayga korontada. Ku soo dhawoow inaad u soo dirto sawiro xigasho, saxnaanta QY waa dammaanaddaada tayada.
Qaybaha QY Precision ayaa si weyn loogu isticmaalaa warshado kala duwan. Sida waxyaabaha daruuriga ah ee maalinlaha ah, qalabka ciyaaraha, alaabta lagu ciyaaro, alaabta guriga, qurxinta iwm.
Codsiga qaybaha mashiinnada CNC ee daawashada
Shaqada daboolka dambe ee saacaddu waa hagaajinta dhaqdhaqaaqa, ka hortagga boodhka iyo biyaha, iwm. Inta badan waxay ka samaysan tahay birta aan fiicnayn. Calaamadaha iyo qaababka ayaa lagu daxi karaa dhabarka, guud ahaanna waxaa jira saddex siyaabood oo la isugu keeno kiiska. Riix daboolka: si toos ah ugu dheji sanduuqa saacadda si adag. Marooji daboolka: labada kiis saacadda iyo daboolka dambeba waa la jeexay oo la adkeeyay; gunta iskoolada: kiiska saacadda iyo daboolka dambe waxa lagu hagaajiyaa boolal, kuwaas oo inta badan lagu arko kiisaska saacadaha labajibbaaran.Kiisku wuxuu ka ilaaliyaa dhaqdhaqaaqa saacadda boodhka dibadda, sayaxa ama gariirka, isla markaana wuxuu bixiyaa saacadda muuqaal quruxsan oo soo jiidasho leh. Kiisaska saacadaha badankoodu waxay ka samaysan yihiin 316L bir aan lahayn.
Kiiska saacadaha caanka ah ee caanka ah ayaa guud ahaan ka samaysan bir, bir aan lahayn, dahab K, platinum, ceramics-ka sare ah (sida saacadaha radar), aluminium tungsten titanium iyo qalab kale oo loogu talagalay saacadaha caanka ah. Kiiska saacadda waxaa loo qaybiyaa walxo, gaar ahaan kiis alloy zinc, kiis naxaas ah, kiis bir ah iyo kiis titanium. Socodka guud ee kiisas bir ah oo kala duwan aad ugama duwana. Hababka teknoolajiyada ugu muhiimsan ee soo saarista iyo habaynta qolofka saacadaha waa: leexinta, wax-shiididda, qodista, shiididda iyo wixii la mid ah.
Hore: Codsiga Warshadaha Caafimaadka
Xiga: Habaynta Shaabada
Qaybaha Aluminiumka Wareega
Qaybaha leexashada naxaasta
Cnc Milling iyo leexashada
Cnc Qaybaha Wareega
Qaybaha Wareega ee Birta Ah